Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/1 Septambra 2015 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/1 Septambra 2015
Après (nitranga in-1) : Après avoir pris l'argent de la caisse, ils empruntaient la route vers Sahalava et Mahasoakely. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
bandits (nitranga in-3) : Par ailleurs, trois personnes selon des sources auprès des Forces de l'ordre, des bandits armés, ont été interceptées par les éléments de cette unité. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
mila (nitranga in-6) : Tokana ny olana: mila taratasy fahazoana miasa izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
vers (nitranga in-2) : la ville de Fianarantsoa a été, hier vers 16 heures 45 minutes, le théâtre d'une course poursuite. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Nalefa (nitranga in-1) : Nalefa eny amin'ny tranom-paty kosa ny razana. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
Saodita (nitranga in-1) : Any Arabia Saodita ny iray amin'ny mpiray tampoho aminy, ny hafa any Jordania, Torkia ary Libanona. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
vondronosy (nitranga in-2) : Mety azo atao ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'i Etazonia sy i Japana hiarovana ny sisitany takian'i Japana ao amin'ny farany andrefana indrindra amin'ny vondronosy, indrindra fa ireo vondronosy Senaku izay takian'i Shina sy Taiwan ihany koa. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
fiankaviany (nitranga in-1) : Tahaka izany koa ny fiankaviany, niteny i Orfahli fa feno fanahiana ry zareo manerana ny Afovoany-Atsinanana. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
théâtre (nitranga in-1) : la ville de Fianarantsoa a été, hier vers 16 heures 45 minutes, le théâtre d'une course poursuite. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
sont (nitranga in-1) : Selon les informations qui nous sont parvenues, le commandant de L‘Unité d'Intervention Rapide (UIR) de la police a été atteint par deux balles aux pieds. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
hevitry (nitranga in-1) : Ny Lalàna vaovaon'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana, izay mety tsy hifanaraka amin'ny Lalampanorenana ara-teknika, dia manitsakitsaka ny hevitry ny andininy fahasivy amin'ny “lalampanorenan'ny Fandriampahalemana” Japoney taorian'ny ady [lehibe faharoa]. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Sisily (nitranga in-1) : Tonga teo amin'ny morontsirak'i Sisily ny sambon-dry zareo. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
teruhito (nitranga in-1) : com/DWfMGYE1kI — ushiro teruhito (@ustht) August 30, 2015
Olona 30. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
handrakitra (nitranga in-1) : [Nahazo olona tokoa ny fihetsiketsehana] nila angidimby ry zareo handrakitra ny habeny. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
【動画】ヘリからの空撮も必見！ (nitranga in-1) : co/IOKVF4NacD 【動画】ヘリからの空撮も必見！ pic. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
sans (nitranga in-1) : Cette fois sans blesser personne. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Osaka (nitranga in-1) : 000 manao fihetsiketsehana ao Osaka
Eny fa na dia amin'ny faritany sarodalana amin'ny tanànan'i Tokushima aza dia ahitana mpanao fihetsiketsehana midina an-dalambe : 徳島でデモに遭遇！出番まで時間あるので合流します‼︎ pic. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
niainana (nitranga in-1) : Tamin'ny 2012, tsy azo niainana intsony tao Jobar. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Górnicky (nitranga in-2) : Spotlight
Noforonin'ilay mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices, Jakub Górnicki, ny podcast Spotlight, izay mampisongadina ireo tafatafa fanadihadiana sy ny mombamomba ireo hetsika faraparany miseho eran-tany, izay mifantoka manokana amin'i Eorôpa Atsinanana. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
dolara (nitranga in-1) : “Nilaza aho fa 2000 dolara ihany no ananako. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Gresy (nitranga in-2) : kos, Gresy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Arabo (nitranga in-1) : Hyperlink
Ao anatin'ny sehatra fiadian-kevitry ny Hyperstage ny podcast Hyperlink, izay rindrambaiko amin'ny teny Arabo mifantoka amin'ny teknôlôjia, noforonin'i Beshr Kayali (@beshr) s'i Saleh (@mskayyali). (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Kevin (nitranga in-1) : sarin'ny Global Voices Radio an'i Kevin Rothrock
Manomboka ny 1 Septambra, handeha tsy an-kiato anaty aterineto ny Global Voices Radio. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Sahalava (nitranga in-2) : Après avoir pris l'argent de la caisse, ils empruntaient la route vers Sahalava et Mahasoakely. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nohodidiny (nitranga in-1) : com/6iSK41wysH
— 盛田隆二 / 0830国会前 (@product1954) August 30, 2015 Sary manokan'ny gazety Mainichi: Antenimieram-Pirenena nohodidinin'ny fihetsiketsehana manohitra ny volavolan-kevitra Fandriampahalemana sy Filaminana. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
empruntaient (nitranga in-1) : Après avoir pris l'argent de la caisse, ils empruntaient la route vers Sahalava et Mahasoakely. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nahatongavana (nitranga in-1) : Saingy ny tena fotoana lany nahatongavana tao. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
quelques (nitranga in-1) : Il y a quelques semaines, après une attaque à main armée, les malfaiteurs utilisaient toujours cet embranchement de Sahalava pour disparaître dans la nature. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Libanona (nitranga in-4) : Tsy vao ela izay, mpianatra lalàna tao Libanona izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
pris (nitranga in-1) : Après avoir pris l'argent de la caisse, ils empruntaient la route vers Sahalava et Mahasoakely. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nifindran' (nitranga in-1) : ”
Nilaza i Bergamaschi fa tsy ela taorian'ny nifindran'i Orfahli nankany Ejipta, dia nanomboka nitady asa izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
handefasana (nitranga in-1) : Amin'ny mahatanora sy mahasyriana tsy manana fahasembanana azy dia matahotra izy ny mety hisamboran'ny mpanohana ny fitondrana syriana azy ka handefasana azy mody hiady. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Mahavatse (nitranga in-2) : Tokantranona mpandraharaha iray monina ao amin'ny fokontany Mahavatse I no notafihan'ny dimilahy tsy nisaron-tava, nirongo basy ny efatra, ny alin'ny asabotsy nifoha ny alahady, tokony ho tamin'ny iray ora tany ho any. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
agosto (nitranga in-2) : com/YUe47RMHMG
— Cody Simpson (@CodySimpson) agosto 13, 2015 Ambony sambo iray mankany Italia miaraka amin'ny mpitady fialokalofana sy mpifindra monina 234 hafa. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
fandraisambahiny (nitranga in-1) : 15 Aogositra 2015 — Syriana hialokaloka tonga tamin'ny lakana iray feno olona manamorona ny moron-dranomasin'ny nosy grika ao Kos eo amin'ny “torapasik'i' Psalidi akaikin'ny fanorenan'ny fandraisambahiny mirentirentin'ny nosy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
produites (nitranga in-1) : Chose curieuse, selon toujours les témoignages, les détonations produites par leurs armes s'apparentent plutôt à des explosions de pétards. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
hoentina (nitranga in-1) : Vola izay saika hividianana entana hoentina hitety tsena any Andranovory Toliara II. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
sarodalana (nitranga in-1) : 000 manao fihetsiketsehana ao Osaka
Naomy (nitranga in-1) : Mpanoratra Nevin ThompsonNandika Naomy · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza
· Zarao:  twitter facebook reddit googleplus. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
大阪3万人集会 (nitranga in-1) : 大阪3万人集会 pic. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
nihananjavona (nitranga in-1) : Avy eo nihananjavona tsikelikely ny lehilahy teo amin'ny manodidina, na voatery hiady ao amin'ny tafika Syriana navoahidy satria heverina ho mpikamban'ny mpanohitra. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Arabia (nitranga in-1) : Any Arabia Saodita ny iray amin'ny mpiray tampoho aminy, ny hafa any Jordania, Torkia ary Libanona. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
butin (nitranga in-1) : Une fois en possession du butin, les voleurs ont vidé le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Airtime (nitranga in-1) : Avy amin'ny alalan'ny sehatra fiadian-kevitra Airtime Pro, dia afaka hahazo ny tobin'onjampeonay ao anaty Aterineto ianao amin'ny fampiasàna rindrambaiko fanokafana vohikala na fitaovana azo entina mandehandeha. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
hisamboran' (nitranga in-1) : Amin'ny mahatanora sy mahasyriana tsy manana fahasembanana azy dia matahotra izy ny mety hisamboran'ny mpanohana ny fitondrana syriana azy ka handefasana azy mody hiady. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
fifampizarana (nitranga in-1) : org tamin'ny 25 Aogositra 2015, ary nivoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
pratika (nitranga in-1) : Amin'ny voambolana pratika, ny fiarahana miaro tena dia hidika hoe afa-manao bemidina famafana maro dia maro i Japana, mametraka sehatra fiarovana amin'ny sambo haingam-pandeha Aegis, ary miambina manaramaso ny zotran'ireo sambo mpitondra solika. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
possession (nitranga in-1) : Une fois en possession du butin, les voleurs ont vidé le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
navoahidy (nitranga in-1) : Avy eo nihananjavona tsikelikely ny lehilahy teo amin'ny manodidina, na voatery hiady ao amin'ny tafika Syriana navoahidy satria heverina ho mpikamban'ny mpanohitra. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
naraina (nitranga in-1) : dimy tamin'ireo dahalo nirongo basy sy fitaovam-piadiana avy nangalatra omby 120 vao naraina tao amin'ny tanànan'i Soatanimbary Ihosy no maty lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana ny herinandro iny. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
Cecy (nitranga in-1) : Ceci peut-être pour dire qu'ils ont utilisé des armes de fabrication locale, moins de bruit mais beaucoup de dégâts. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
utilisé (nitranga in-1) : Ceci peut-être pour dire qu'ils ont utilisé des armes de fabrication locale, moins de bruit mais beaucoup de dégâts. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Alemaina (nitranga in-2) : Alemaina no tiany andehanana. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Victorien (nitranga in-1) : Efa tara anefa ny fahatongavan'ireto farany ka nampanano sarotra ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy, hoy ny filohan'ny fokontany ao Mahavatse Tanambao, Atoa Boto Victorien, nitafa tamin'ny mpanao gazety, omaly antoandro. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
tanànan' (nitranga in-2) : dimy tamin'ireo dahalo nirongo basy sy fitaovam-piadiana avy nangalatra omby 120 vao naraina tao amin'ny tanànan'i Soatanimbary Ihosy no maty lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana ny herinandro iny. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, www.midi-madagasikara.mg)
nalay (nitranga in-1) : Sary nalain'i Wassilis Aswestopoulos. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Spotlight (nitranga in-5) : Amin'ity herinandro ity dia handray podcast mpiara-miasa roa vaovao isika: Spotlight sy Hyperlink. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
mandrosezaRamatoa (nitranga in-1) : mandrosezaRamatoa hita faty tao anaty rano
Ramatoa iray manodidina ny 45 taona eo ho eo no hitan'ny olona natsingevan'ny rano teny Mandroseza, omaly maraina. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
fihetsketsehana (nitranga in-1) : Nambaran'ny mpikarakara ho fihetsiketsehana lehibe indrindra hanoherana ny famolavaolan-dalàna, mpanao fihetsketsehana tombanana ho any amin'ny 120. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
hotontosaina (nitranga in-1) : 000 no nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana hafa nanerana an'i Japana, ka ireo rehetra ireo dia narindra hotontosaina tamin'ny 29 aogositra. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
pour (nitranga in-2) : Ceci peut-être pour dire qu'ils ont utilisé des armes de fabrication locale, moins de bruit mais beaucoup de dégâts. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
sous (nitranga in-1) : Encore sous le choc, hier soir, les policiers de la capitale du Betsileo ont entamé une enquête. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Mahasoakely (nitranga in-1) : Après avoir pris l'argent de la caisse, ils empruntaient la route vers Sahalava et Mahasoakely. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
arrive (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Sara (nitranga in-1) : “Tamin'ny 2013, lasa mpialokaloka mandositra ady tao Ejipta i Thair,” hoy i Sara Bergamaschi, namana akaikin'i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
kosa (nitranga in-6) : Maty voakapa famaky teo amin'ny lohany ny raim-pianakaviana tompon-trano, fantatry ny maro amin'ny hoe : « Nahoda Jules », raha naratra mafy voatoto vodim-basy teo amin'ny lohany kosa ny vadiny. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
enquête (nitranga in-1) : Encore sous le choc, hier soir, les policiers de la capitale du Betsileo ont entamé une enquête. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
hanoherana (nitranga in-2) : An'aliny indray ireo olona nivory tao afovoan-tanànan'i Tokyo tamin'ny 29 aogositra hanoherana ilay lalàna mampiady hevitra hamela an'i Japana handray anjara amin'ny bemidina ara-miaramila miaraka amin'ny firenena hafa tahaka an'i Etazonia. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Munich (nitranga in-1) : com/0W7N9lxaK7
— Cody Simpson (@CodySimpson) agosto 14, 2015 Taorian'ny dia lava sy mampididoza dia tonga aty Munich aho, ny vavahady fidirana ho an'ny mpifindramonina maro. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
unbelievable (nitranga in-1) : Their strength is unbelievable. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
propriétaire (nitranga in-1) : Un des attaquants a tiré, blessant le propriétaire à la poitrine du côté droit. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Hyperlink (nitranga in-3) : Amin'ity herinandro ity dia handray podcast mpiara-miasa roa vaovao isika: Spotlight sy Hyperlink. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
faraparany (nitranga in-1) : Spotlight
Thair (nitranga in-1) : Niditra tao amin'ny sambo i Thair Orfahli tamin'ny fahafantarana fa mety ho faty izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
mampiantrano (nitranga in-1) : I Jakub Górnicki no mampiantrano ny Spotlight, izay podcast vaovaon'ny bilaogy miresaka fitsangatsanganana sy fanaovana tatitra, Podróżniccy. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
naratra (nitranga in-3) : Maty voakapa famaky teo amin'ny lohany ny raim-pianakaviana tompon-trano, fantatry ny maro amin'ny hoe : « Nahoda Jules », raha naratra mafy voatoto vodim-basy teo amin'ny lohany kosa ny vadiny. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
mahasyriana (nitranga in-1) : Amin'ny mahatanora sy mahasyriana tsy manana fahasembanana azy dia matahotra izy ny mety hisamboran'ny mpanohana ny fitondrana syriana azy ka handefasana azy mody hiady. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Syria (nitranga in-4) : Saingy izany ihany koa no atrehiny raha nijanona tao Syria izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
firongatry (nitranga in-1) : Noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ao amin'ity fokontany ity dia mangataka hametrahana tobin'ny mpitandro filaminana faran'izay haingana ny vahoaka. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
ravehivavy (nitranga in-3) : “Saika niara-nandany ny andro niaraka izahay,” hoy ravehivavy, “Niaranitsangatsangana nanerana ny firenena izahay. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
pôlisy (nitranga in-2) : Ny tsy fantatr'ireo olon-dratsy dia ny hoe efa pôlisy manao fanamiana sivily ireo nifanao fotoana taminy. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
nijaona (nitranga in-1) : '”
Feno fankasitrahana tokoa izy, tsy nijaona ela tao Italia. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
manaramaso (nitranga in-1) : Amin'ny voambolana pratika, ny fiarahana miaro tena dia hidika hoe afa-manao bemidina famafana maro dia maro i Japana, mametraka sehatra fiarovana amin'ny sambo haingam-pandeha Aegis, ary miambina manaramaso ny zotran'ireo sambo mpitondra solika. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
manitsakitsaka (nitranga in-1) : Ny Lalàna vaovaon'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana, izay mety tsy hifanaraka amin'ny Lalampanorenana ara-teknika, dia manitsakitsaka ny hevitry ny andininy fahasivy amin'ny “lalampanorenan'ny Fandriampahalemana” Japoney taorian'ny ady [lehibe faharoa]. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
teknôlôjia (nitranga in-5) : Ity no atao hoe Spotlight – fiadian-kevitra momba ny fiarahamonina sy ny teknôlôjia. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
facebook (nitranga in-3) : -->
Mpanoratra GV RadioNandika miora · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza
· Zarao:  twitter facebook reddit googleplus. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Senaku (nitranga in-1) : Mety azo atao ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'i Etazonia sy i Japana hiarovana ny sisitany takian'i Japana ao amin'ny farany andrefana indrindra amin'ny vondronosy, indrindra fa ireo vondronosy Senaku izay takian'i Shina sy Taiwan ihany koa. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Eorôpa (nitranga in-1) : Spotlight
hividianana (nitranga in-1) : Vola izay saika hividianana entana hoentina hitety tsena any Andranovory Toliara II. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
entamé (nitranga in-1) : Encore sous le choc, hier soir, les policiers de la capitale du Betsileo ont entamé une enquête. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Jules (nitranga in-1) : Maty voakapa famaky teo amin'ny lohany ny raim-pianakaviana tompon-trano, fantatry ny maro amin'ny hoe : « Nahoda Jules », raha naratra mafy voatoto vodim-basy teo amin'ny lohany kosa ny vadiny. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
Ryujy (nitranga in-1) : Nisy sioka avy amin'ny mpanoratra Japoney Ryuji Morita nanapika sary ny sehatra :
毎日新聞・写真特集 国会議事堂取り囲み「戦争法案反対！」 http://t. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
recueillis (nitranga in-1) : recueillis par Saholy/r. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
voavely (nitranga in-1) : maratra mafy ny vadin'ilay mpandraharaha, voavely teo amin'ny lohany. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
police (nitranga in-3) : Selon les informations qui nous sont parvenues, le commandant de L‘Unité d'Intervention Rapide (UIR) de la police a été atteint par deux balles aux pieds. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
mais (nitranga in-1) : Ceci peut-être pour dire qu'ils ont utilisé des armes de fabrication locale, moins de bruit mais beaucoup de dégâts. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Kayaly (nitranga in-1) : Hyperlink
Natao (nitranga in-1) : Natao teny Anosibe indray nony avy eo ary mbola tsy tonga ihany ny mpitondra ny basy. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
détonations (nitranga in-1) : Chose curieuse, selon toujours les témoignages, les détonations produites par leurs armes s'apparentent plutôt à des explosions de pétards. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
2015 (nitranga in-9) : com/6iSK41wysH
— 盛田隆二 / 0830国会前 (@product1954) August 30, 2015 Sary manokan'ny gazety Mainichi: Antenimieram-Pirenena nohodidinin'ny fihetsiketsehana manohitra ny volavolan-kevitra Fandriampahalemana sy Filaminana. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
auprès (nitranga in-1) : Par ailleurs, trois personnes selon des sources auprès des Forces de l'ordre, des bandits armés, ont été interceptées par les éléments de cette unité. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
main (nitranga in-1) : Il y a quelques semaines, après une attaque à main armée, les malfaiteurs utilisaient toujours cet embranchement de Sahalava pour disparaître dans la nature. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
2013 (nitranga in-1) : “Tamin'ny 2013, lasa mpialokaloka mandositra ady tao Ejipta i Thair,” hoy i Sara Bergamaschi, namana akaikin'i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
2012 (nitranga in-1) : Tamin'ny 2012, tsy azo niainana intsony tao Jobar. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
fifadonana (nitranga in-1) : Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana dia nandritra ny fanarahan-dia no raikitra ny fifadonana nahery vaika teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo dahalo, ka teo no nahafaty sy namparatra an'ireo malaso mpangalatra omby. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
Beshr (nitranga in-1) : Hyperlink
amiko (nitranga in-1) : Nampandrenesiko haingana ireo mpiara-miasa amiko raha vao hitako hoe tena olona ilay izy », hoy ny filazan'ny rangahy iray, miasa eny an-toerana. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
découvert (nitranga in-1) : Selon toujours les informations, les cinq bandits ont opéré à visage découvert. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
tafaporitsaka (nitranga in-1) : Lehilahy iray teo an-tokotany notifirin'ireo jiolahy nefa tafaporitsaka no niezaka niantso vonjy teo amin'ny manodidina sady nampandre ny sefo fokontany. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
hospitalier (nitranga in-1) : Ce dernier a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Noraisy (nitranga in-1) : Noraisin'ny fianakavian'i Bergamaschi i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Morita (nitranga in-1) : Nisy sioka avy amin'ny mpanoratra Japoney Ryuji Morita nanapika sary ny sehatra :
Jakub (nitranga in-2) : Spotlight
国会議事堂取り囲み「戦争法案反対！」 (nitranga in-1) : Nisy sioka avy amin'ny mpanoratra Japoney Ryuji Morita nanapika sary ny sehatra :
Vers (nitranga in-1) : Vers l'heure indiquée plus haut, un grossiste du quartier d'Antarandolo a été visité par cinq hommes armés. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
natorian' (nitranga in-1) : Tsy maintsy teo amin'ny tokotanin-tsambo no natorian'ny sasany amin'izy ireo ary anisan'izany i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
sisintany (nitranga in-1) : Mbola hanavatsava sisintany maro izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Orfahly (nitranga in-15) : Niditra tao amin'ny sambo i Thair Orfahli tamin'ny fahafantarana fa mety ho faty izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
bala (nitranga in-1) : Nitsoaka niaraka amin'ny omby kosa ireo dahalo raha vao nahita ny namany rotiky ny bala. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
nitsingevana (nitranga in-1) : « Izaho handeha hanadio iny moron'ny rano iny no nahita zavatra nitsingevana toa olona teo amoron-drano. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
nahita (nitranga in-3) : Nitsoaka niaraka amin'ny omby kosa ireo dahalo raha vao nahita ny namany rotiky ny bala. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, www.midi-madagasikara.mg)
Nihamafy (nitranga in-1) : Nihamafy ny ady mahery teo amin'ny tafika Syriana sy ny mpanohitra. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
route (nitranga in-1) : Après avoir pris l'argent de la caisse, ils empruntaient la route vers Sahalava et Mahasoakely. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
ialokalofako (nitranga in-1) : “Tiako ny toby ialokalofako fa afa-diana tsara aho,” hoy izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
notafihan' (nitranga in-1) : Tokantranona mpandraharaha iray monina ao amin'ny fokontany Mahavatse I no notafihan'ny dimilahy tsy nisaron-tava, nirongo basy ny efatra, ny alin'ny asabotsy nifoha ny alahady, tokony ho tamin'ny iray ora tany ho any. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
Tokantranona (nitranga in-1) : Tokantranona mpandraharaha iray monina ao amin'ny fokontany Mahavatse I no notafihan'ny dimilahy tsy nisaron-tava, nirongo basy ny efatra, ny alin'ny asabotsy nifoha ny alahady, tokony ho tamin'ny iray ora tany ho any. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
nosambory (nitranga in-1) : r
The post Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin'ny BC appeared first on Midi Madagasikara. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
place (nitranga in-1) : Une fois sur place, ces bandits ont demandé l'argent. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
The post Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra appeared first on Midi Madagasikara. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
dizitaly (nitranga in-2) : Hasongadina amin'izany ihany koa ny votoatin'ny mpiara-miasa voalaza tao anatin'ireo lahatsoratry ny GV Radio teo aloha, tahaka ny tantara dizitaly avy amin'ny Radio Ambulante, ireo podcast misongadina avy ao amin'ny Loa, ary ny hiran'izao tontolo izay avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV avy any Meksika sy Gana, sy ireo maro hafa. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
first (nitranga in-5) : Eric Manitrisa
The post Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra appeared first on Midi Madagasikara. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
Copyright (nitranga in-1) : Copyright Demotix
Lahatsoratra sy tatitra radio nataon'i Shirin Jaafari hoan'ny The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
fantatry (nitranga in-1) : Maty voakapa famaky teo amin'ny lohany ny raim-pianakaviana tompon-trano, fantatry ny maro amin'ny hoe : « Nahoda Jules », raha naratra mafy voatoto vodim-basy teo amin'ny lohany kosa ny vadiny. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
Nevin (nitranga in-1) : Mpanoratra Nevin ThompsonNandika Naomy · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza
Aswestopoulos (nitranga in-1) : Sary nalain'i Wassilis Aswestopoulos. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
hiarovana (nitranga in-1) : Mety azo atao ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'i Etazonia sy i Japana hiarovana ny sisitany takian'i Japana ao amin'ny farany andrefana indrindra amin'ny vondronosy, indrindra fa ireo vondronosy Senaku izay takian'i Shina sy Taiwan ihany koa. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
hametrahana (nitranga in-1) : Noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ao amin'ity fokontany ity dia mangataka hametrahana tobin'ny mpitandro filaminana faran'izay haingana ny vahoaka. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
Nirefodrefotra (nitranga in-1) : Nirefodrefotra ny basy. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
balan' (nitranga in-1) : dimy tamin'ireo dahalo nirongo basy sy fitaovam-piadiana avy nangalatra omby 120 vao naraina tao amin'ny tanànan'i Soatanimbary Ihosy no maty lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana ny herinandro iny. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
noforony (nitranga in-1) : Hyperlink
taty (nitranga in-1) : Antso roa taty aoriana, nahita ny mpanondrana azy i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
sisitany (nitranga in-1) : Mety azo atao ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'i Etazonia sy i Japana hiarovana ny sisitany takian'i Japana ao amin'ny farany andrefana indrindra amin'ny vondronosy, indrindra fa ireo vondronosy Senaku izay takian'i Shina sy Taiwan ihany koa. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
parlé (nitranga in-1) : On ne sait pas ce qui s'était passé réellement car la poudre a parlé. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Aostraliana (nitranga in-1) : Nanome ny kaonty Twitter-ny tamin'i Orfahli ilay mpihira Aostraliana Cody Simpson ahafahany mandefa an-tsioka ny diany. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
partaient (nitranga in-1) : Au moment où ils partaient, des éléments de la police, UIR et du commissariat central, étaient sur le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nifanao (nitranga in-1) : Ny tsy fantatr'ireo olon-dratsy dia ny hoe efa pôlisy manao fanamiana sivily ireo nifanao fotoana taminy. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
isanandro (nitranga in-1) : Mandritra ny 24 ora isanandro, ary 7 andro isan-kerinandro, dia afaka hankafy ireo fandaharana eran-tany ny mpihaino, tafiditra anatin'izany ny hiran'izao tontolo izao, ireo tafatafa mikasika ireo hetsika vaovao, ary ny votoaty tsy misy toa azy avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny podcast anay manerana ny fiozaon'ora samy hafa. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
ejipsiana (nitranga in-1) : “Araka ny lalàna ejipsiana dia mila mangataka io taratasy fahazoana miasa io avy amin'ny fikambanana arabo ara-dalàna iray ao amin'ny firenenao,” hoy ravehivavy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
bebe (nitranga in-1) : Mitondra ny vahoaka sy ireo hevitra manova ny tontolontsika ity fandaharana ity ary mikendry ny hanampy anao hanakatra bebe kokoa izany. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Jobar (nitranga in-3) : Niverina nody nitsidika hatrany ny fianakaviany tao Jobar, tsy lavitra ny renivohitra Syriana ao Damaskosy, izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
karàna (nitranga in-1) : Ny talata lasa teo ny fotoana nifanomezana ka teny amin'ny fasan'ny karàna teny Anosizato aloha no natao izany. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
dans (nitranga in-2) : Ce dernier a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
今日は参加者述べ35万人でした！すごい！ (nitranga in-1) : 000 ireo olona nanatrika ny fihetsiketsehana :
今日は参加者述べ35万人でした！すごい！ pic. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Gana (nitranga in-1) : Hasongadina amin'izany ihany koa ny votoatin'ny mpiara-miasa voalaza tao anatin'ireo lahatsoratry ny GV Radio teo aloha, tahaka ny tantara dizitaly avy amin'ny Radio Ambulante, ireo podcast misongadina avy ao amin'ny Loa, ary ny hiran'izao tontolo izay avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV avy any Meksika sy Gana, sy ireo maro hafa. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Cody (nitranga in-3) : Nanome ny kaonty Twitter-ny tamin'i Orfahli ilay mpihira Aostraliana Cody Simpson ahafahany mandefa an-tsioka ny diany. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
notifiry (nitranga in-1) : Lehilahy iray teo an-tokotany notifirin'ireo jiolahy nefa tafaporitsaka no niezaka niantso vonjy teo amin'ny manodidina sady nampandre ny sefo fokontany. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
éléments (nitranga in-2) : Par ailleurs, trois personnes selon des sources auprès des Forces de l'ordre, des bandits armés, ont été interceptées par les éléments de cette unité. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nosoratan' (nitranga in-1) : Miezaka ny hifantoka amin'ny teknôlôjia farany eran-tany, ireo fandinihan'ny manam-pahaizana amin'ny teknôlôjia, ireo tsikera momba ny boky, ary ireo lahatsoratra fanehoan-kevitra nosoratan'ny ekipan'ny Hyperstage, io vohikala io. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Noforony (nitranga in-1) : Spotlight
indiquée (nitranga in-1) : Vers l'heure indiquée plus haut, un grossiste du quartier d'Antarandolo a été visité par cinq hommes armés. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
naiditra (nitranga in-1) : Olona roa no voasambotra teo ka natolotra ny fampanoavana omaly ary naiditra am-ponja vonjimaika. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
lalampanorenana (nitranga in-1) : Hialana amin'ny fombafombam-panitsiana lalampanorenana lava dia lava izay mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ny Lapa Ambony amin'ny herintaona, dia miezaka ny “hamaritra indray” ny fandefasana miaramila amin'ny voambolana mifanaraka amin'ny Lalampanorenana Mandala ny Fandriampahaleman'i Japana ny antoko mitondra ao amin'izao fotoana. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
毎日新聞・写真特集 (nitranga in-1) : Nisy sioka avy amin'ny mpanoratra Japoney Ryuji Morita nanapika sary ny sehatra :
strength (nitranga in-1) : Their strength is unbelievable. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
After (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Hyperstage (nitranga in-3) : Hyperlink
hitan' (nitranga in-1) : mandrosezaRamatoa hita faty tao anaty rano
Jaafary (nitranga in-1) : Copyright Demotix
centre (nitranga in-1) : Ce dernier a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
opéré (nitranga in-1) : Selon toujours les informations, les cinq bandits ont opéré à visage découvert. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Nampanatena (nitranga in-1) : Nampanatena an'i Orfahli izy fa ho tonga ao Italia ao anatin'ny dimy andro. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
commissariat (nitranga in-1) : Au moment où ils partaient, des éléments de la police, UIR et du commissariat central, étaient sur le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nanantsakafo (nitranga in-1) : Tsy nanantsakafo izahay, tsy betsaka ny rano nanananay ary naloto dia naloto izany rano izany,” hoy izy nampahatsiahy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Voices (nitranga in-5) : sarin'ny Global Voices Radio an'i Kevin Rothrock
nampahatsiahy (nitranga in-3) : “Niteny tamin'ny namako aho fa rehefa tsy tonga aho dia afa-miantso ity laharana ity ary hanome ny zavatra rehetra amin'ny fianakaviako,” hoy izy nampahatsiahy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
disparaître (nitranga in-1) : Il y a quelques semaines, après une attaque à main armée, les malfaiteurs utilisaient toujours cet embranchement de Sahalava pour disparaître dans la nature. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nampanano (nitranga in-1) : Efa tara anefa ny fahatongavan'ireto farany ka nampanano sarotra ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy, hoy ny filohan'ny fokontany ao Mahavatse Tanambao, Atoa Boto Victorien, nitafa tamin'ny mpanao gazety, omaly antoandro. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
rotiky (nitranga in-1) : Nitsoaka niaraka amin'ny omby kosa ireo dahalo raha vao nahita ny namany rotiky ny bala. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
takian' (nitranga in-2) : Mety azo atao ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'i Etazonia sy i Japana hiarovana ny sisitany takian'i Japana ao amin'ny farany andrefana indrindra amin'ny vondronosy, indrindra fa ireo vondronosy Senaku izay takian'i Shina sy Taiwan ihany koa. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
tirs (nitranga in-1) : Pour couvrir leur fuite, ils ont fait des tirs en l'air, deux selon les témoignages. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
ahafahany (nitranga in-2) : Raha tsorina, mila miverina mankany Damaskosy i Orfahli ahafahany maka fahazoan-dalana. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Wassilis (nitranga in-1) : Sary nalain'i Wassilis Aswestopoulos. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
mirentirenty (nitranga in-1) : 15 Aogositra 2015 — Syriana hialokaloka tonga tamin'ny lakana iray feno olona manamorona ny moron-dranomasin'ny nosy grika ao Kos eo amin'ny “torapasik'i' Psalidi akaikin'ny fanorenan'ny fandraisambahiny mirentirentin'ny nosy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
fialokalofana (nitranga in-3) : Nandalo andro mahaana mihoatra ny folo andro an-dranomasina i Orfahli niaraka tamin'ireo mpitady fialokalofana mihoatra ny 100 hafa. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Shinzo (nitranga in-1) : Ny andininy faha-9 amin'ny Lalampanorenana Japoney dia mametraka ho tsy ara-dalàna ny ady ho endrika ananganana fifandirana iraisampirenena, na dia miteny aza ny governemanta japoney eo ambany fitarihan'i Shinzo Abe fa tsy maintsy mandray anjara amin'ny hetsika miaramila iarahana amin'ny mpiara-dia aminy, indrindra fa i Etazonia ny firenena. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Anosipatrana (nitranga in-2) : Efa harivariva vao tena tontosa ny fotoana, izay ny niafarany teny Anosipatrana. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
Jentilisa (nitranga in-1) : Mpanoratra Public Radio InternationalNandika Jentilisa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza
Tokushima (nitranga in-2) : 000 manao fihetsiketsehana ao Osaka
locale (nitranga in-1) : Ceci peut-être pour dire qu'ils ont utilisé des armes de fabrication locale, moins de bruit mais beaucoup de dégâts. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
aho' (nitranga in-1) : Raha mila ianao dia omeko anao fa raha tsy mila dia hitady olon-kafa aho,'” hoy izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nadika (nitranga in-3) : -->
reddit (nitranga in-3) : -->
passé (nitranga in-1) : On ne sait pas ce qui s'était passé réellement car la poudre a parlé. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Lapa (nitranga in-1) : Hialana amin'ny fombafombam-panitsiana lalampanorenana lava dia lava izay mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ny Lapa Ambony amin'ny herintaona, dia miezaka ny “hamaritra indray” ny fandefasana miaramila amin'ny voambolana mifanaraka amin'ny Lalampanorenana Mandala ny Fandriampahaleman'i Japana ny antoko mitondra ao amin'izao fotoana. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
nivoahan' (nitranga in-1) : Mbola mitohy kosa ny fanadihadian'ny pôlisy misahana ny raharaha heloka bevava ary izany dia miezaka ny hahafantatra ny toby nivoahan'ireo basy ireo sy ny mety ho tompon'andraikitra amin'izany. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
dimilahy (nitranga in-1) : Tokantranona mpandraharaha iray monina ao amin'ny fokontany Mahavatse I no notafihan'ny dimilahy tsy nisaron-tava, nirongo basy ny efatra, ny alin'ny asabotsy nifoha ny alahady, tokony ho tamin'ny iray ora tany ho any. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
hamela (nitranga in-3) : ” Soratra mivaky hoe “Tsy hamela anareo mandrakizay handefa anay an'ady izahay” sy ny “Sakano i Abe. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
fampiasàna (nitranga in-1) : Avy amin'ny alalan'ny sehatra fiadian-kevitra Airtime Pro, dia afaka hahazo ny tobin'onjampeonay ao anaty Aterineto ianao amin'ny fampiasàna rindrambaiko fanokafana vohikala na fitaovana azo entina mandehandeha. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
boay (nitranga in-1) : “Eny fa na ny raiko aza dia tsaroako niteny tamiko hoe, ‘Sara, gaga aho mahita ity boay ity fa tena tsy misy na inona na inona tokoa any aminy fa ny findainy kely iray monja ary feno lavaka ny kirarony saingy faly dia faly tokoa izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
tiré (nitranga in-1) : Un des attaquants a tiré, blessant le propriétaire à la poitrine du côté droit. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Psalidy (nitranga in-1) : 15 Aogositra 2015 — Syriana hialokaloka tonga tamin'ny lakana iray feno olona manamorona ny moron-dranomasin'ny nosy grika ao Kos eo amin'ny “torapasik'i' Psalidi akaikin'ny fanorenan'ny fandraisambahiny mirentirentin'ny nosy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
sait (nitranga in-1) : On ne sait pas ce qui s'était passé réellement car la poudre a parlé. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
tamindry (nitranga in-1) : Misy olona antitra, bevohoka ary ankizy kely niaraka tamindry zareo tamin'ny dia. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Podróżniccy (nitranga in-1) : I Jakub Górnicki no mampiantrano ny Spotlight, izay podcast vaovaon'ny bilaogy miresaka fitsangatsanganana sy fanaovana tatitra, Podróżniccy. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
heveria (nitranga in-1) : Nandany ny lalàna ny Lapan'ny Solontenam-Bahoakan'i Japana tamin'ny voalohandohan'ny volana aogositra, ary heveria fa hanasonia ny lalàna amin'ny fomba ofisialy ny Lapan'ny Fampihavanana amin'ny 27 septambra. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
mombamomba (nitranga in-1) : Spotlight
mampino (nitranga in-1) : Tsy mampino ny tanjaky ry zareo. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Anosizato (nitranga in-1) : Ny talata lasa teo ny fotoana nifanomezana ka teny amin'ny fasan'ny karàna teny Anosizato aloha no natao izany. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
namoaka (nitranga in-1) : Nisy sampan'ny SEALDS ihany koa namoaka ny sarin'ny fihetsiketsehana, manombana fa manakaiky ny 350. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Youtube (nitranga in-2) : ” Pikantsary avy amin'ny Fantsona Youtube Ofisialin'ny FNN. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Soatanimbary (nitranga in-1) : dimy tamin'ireo dahalo nirongo basy sy fitaovam-piadiana avy nangalatra omby 120 vao naraina tao amin'ny tanànan'i Soatanimbary Ihosy no maty lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana ny herinandro iny. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
ravan' (nitranga in-1) : Orfahli dia iray amin'ireo lehilahy, vehivavy, ankizy an'arivony mandositra ireo firenena ao Afovoany-Atsinanana ravan'ny ady. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
témoignages (nitranga in-2) : Pour couvrir leur fuite, ils ont fait des tirs en l'air, deux selon les témoignages. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Tanambao (nitranga in-1) : Efa tara anefa ny fahatongavan'ireto farany ka nampanano sarotra ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy, hoy ny filohan'ny fokontany ao Mahavatse Tanambao, Atoa Boto Victorien, nitafa tamin'ny mpanao gazety, omaly antoandro. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
0830国会前 (nitranga in-1) : com/6iSK41wysH
Raha (nitranga in-4) : Raha ny fanazavana azo dia niditra an-keriny tao an-trano ireo jiolahy sady nanapoaka basy rehefa avy namaky ny varavaram-be anankiroa. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, www.midi-madagasikara.mg)
instant (nitranga in-1) : Et c'est à cet instant que le chef de la police a été atteint. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
many (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nila (nitranga in-1) : [Nahazo olona tokoa ny fihetsiketsehana] nila angidimby ry zareo handrakitra ny habeny. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
bemidina (nitranga in-2) : An'aliny indray ireo olona nivory tao afovoan-tanànan'i Tokyo tamin'ny 29 aogositra hanoherana ilay lalàna mampiady hevitra hamela an'i Japana handray anjara amin'ny bemidina ara-miaramila miaraka amin'ny firenena hafa tahaka an'i Etazonia. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
voakapa (nitranga in-2) : Maty voakapa famaky teo amin'ny lohany ny raim-pianakaviana tompon-trano, fantatry ny maro amin'ny hoe : « Nahoda Jules », raha naratra mafy voatoto vodim-basy teo amin'ny lohany kosa ny vadiny. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
mpialokaloka (nitranga in-2) : “Tamin'ny 2013, lasa mpialokaloka mandositra ady tao Ejipta i Thair,” hoy i Sara Bergamaschi, namana akaikin'i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
hita (nitranga in-2) : mandrosezaRamatoa hita faty tao anaty rano
Lalàna (nitranga in-1) : Ny Lalàna vaovaon'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana, izay mety tsy hifanaraka amin'ny Lalampanorenana ara-teknika, dia manitsakitsaka ny hevitry ny andininy fahasivy amin'ny “lalampanorenan'ny Fandriampahalemana” Japoney taorian'ny ady [lehibe faharoa]. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
voalohandohan' (nitranga in-1) : Nandany ny lalàna ny Lapan'ny Solontenam-Bahoakan'i Japana tamin'ny voalohandohan'ny volana aogositra, ary heveria fa hanasonia ny lalàna amin'ny fomba ofisialy ny Lapan'ny Fampihavanana amin'ny 27 septambra. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
côté (nitranga in-1) : Un des attaquants a tiré, blessant le propriétaire à la poitrine du côté droit. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
point (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
appeared (nitranga in-5) : Eric Manitrisa
lafovidy (nitranga in-1) : Ora vitsy monja mialoha izao no nametraka veloma ny namany izy, nanolotra ny solosaina findainy — ny fananany lafovidy indrindra. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nataon' (nitranga in-1) : Copyright Demotix
namidy (nitranga in-1) : r
dégâts (nitranga in-1) : Ceci peut-être pour dire qu'ils ont utilisé des armes de fabrication locale, moins de bruit mais beaucoup de dégâts. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
boat (nitranga in-1) : On a boat to Italy w/ 234 other refugees and migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
mpifindramonina (nitranga in-1) : com/0W7N9lxaK7
unité (nitranga in-1) : Par ailleurs, trois personnes selon des sources auprès des Forces de l'ordre, des bandits armés, ont été interceptées par les éléments de cette unité. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Shuya (nitranga in-1) : com/EGJtjOk5OY
— Shuya Okino (@shuyakyotojazz) August 30, 2015 manatevin-daharana ny fihetsiketsehana ao Tokushima aho. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
natsingevan' (nitranga in-1) : mandrosezaRamatoa hita faty tao anaty rano
après (nitranga in-1) : Il y a quelques semaines, après une attaque à main armée, les malfaiteurs utilisaient toujours cet embranchement de Sahalava pour disparaître dans la nature. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
ThompsonNandika (nitranga in-1) : Mpanoratra Nevin ThompsonNandika Naomy · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza
blessant (nitranga in-1) : Un des attaquants a tiré, blessant le propriétaire à la poitrine du côté droit. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
lasatsaka (nitranga in-1) : Novonoina sa lasatsaka tao anaty rano. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
Tokyo (nitranga in-2) : An'aliny indray ireo olona nivory tao afovoan-tanànan'i Tokyo tamin'ny 29 aogositra hanoherana ilay lalàna mampiady hevitra hamela an'i Japana handray anjara amin'ny bemidina ara-miaramila miaraka amin'ny firenena hafa tahaka an'i Etazonia. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
naloto (nitranga in-2) : Tsy nanantsakafo izahay, tsy betsaka ny rano nanananay ary naloto dia naloto izany rano izany,” hoy izy nampahatsiahy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Face (nitranga in-1) : Hanohy hanasongadina ny votoaty novokarin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices izahay, tahaka ny GV podcast nahazo marim-pankasitrahana, ny rakipeo avy amin'ireo fotoana voafantina nandritra ny fihaonambe nataonay farany, ary ny rakipeo avy amin'ireo tafatafa tao amin'ny GV Face. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Ambulante (nitranga in-1) : Hasongadina amin'izany ihany koa ny votoatin'ny mpiara-miasa voalaza tao anatin'ireo lahatsoratry ny GV Radio teo aloha, tahaka ny tantara dizitaly avy amin'ny Radio Ambulante, ireo podcast misongadina avy ao amin'ny Loa, ary ny hiran'izao tontolo izay avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV avy any Meksika sy Gana, sy ireo maro hafa. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
World (nitranga in-1) : Copyright Demotix
alemana (nitranga in-1) : [Mizara ny mahaolona]
Tao anatin'izay andro maromaro izay dia ao amin'ny toby fialokalofana iray ao Alemaina izy, nandany ny androny amin'ny fianarana teny anglisy sy alemana. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nampididoza (nitranga in-1) : “Tena nampididoza izany. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nomanina (nitranga in-1) : Miangavy anao hitsidika ny pejy fitotonana ao amin'ny GV Radio mba hijerenao ny zavatra mandeha amin'izao fotoana any amin'ny fiozaon'ora misy anao, sy izay fandaharana nomanina mandritra iny andro iny. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
googleplus (nitranga in-3) : -->
ekipan' (nitranga in-1) : Miezaka ny hifantoka amin'ny teknôlôjia farany eran-tany, ireo fandinihan'ny manam-pahaizana amin'ny teknôlôjia, ireo tsikera momba ny boky, ary ireo lahatsoratra fanehoan-kevitra nosoratan'ny ekipan'ny Hyperstage, io vohikala io. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Saleh (nitranga in-1) : Hyperlink
Okino (nitranga in-1) : com/EGJtjOk5OY
nahitana (nitranga in-2) : « Tsy nahitana na inona na inona momba azy tany aminy, ankoatra ny vola enina arivo ariary tao am-paosiny. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
Taiwan (nitranga in-1) : Mety azo atao ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'i Etazonia sy i Japana hiarovana ny sisitany takian'i Japana ao amin'ny farany andrefana indrindra amin'ny vondronosy, indrindra fa ireo vondronosy Senaku izay takian'i Shina sy Taiwan ihany koa. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
nous (nitranga in-1) : Selon les informations qui nous sont parvenues, le commandant de L‘Unité d'Intervention Rapide (UIR) de la police a été atteint par deux balles aux pieds. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Italy (nitranga in-1) : On a boat to Italy w/ 234 other refugees and migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
étaient (nitranga in-1) : Au moment où ils partaient, des éléments de la police, UIR et du commissariat central, étaient sur le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
mahaana (nitranga in-1) : Nandalo andro mahaana mihoatra ny folo andro an-dranomasina i Orfahli niaraka tamin'ireo mpitady fialokalofana mihoatra ny 100 hafa. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nifanomezana (nitranga in-1) : Ny talata lasa teo ny fotoana nifanomezana ka teny amin'ny fasan'ny karàna teny Anosizato aloha no natao izany. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
SEALDS (nitranga in-1) : Nisy sampan'ny SEALDS ihany koa namoaka ny sarin'ny fihetsiketsehana, manombana fa manakaiky ny 350. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
tampoho (nitranga in-1) : Any Arabia Saodita ny iray amin'ny mpiray tampoho aminy, ny hafa any Jordania, Torkia ary Libanona. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
lava (nitranga in-3) : Hialana amin'ny fombafombam-panitsiana lalampanorenana lava dia lava izay mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ny Lapa Ambony amin'ny herintaona, dia miezaka ny “hamaritra indray” ny fandefasana miaramila amin'ny voambolana mifanaraka amin'ny Lalampanorenana Mandala ny Fandriampahaleman'i Japana ny antoko mitondra ao amin'izao fotoana. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Shina (nitranga in-1) : Mety azo atao ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'i Etazonia sy i Japana hiarovana ny sisitany takian'i Japana ao amin'ny farany andrefana indrindra amin'ny vondronosy, indrindra fa ireo vondronosy Senaku izay takian'i Shina sy Taiwan ihany koa. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
mihamanahy (nitranga in-1) : Rehefa nandeha ny andro dia mihamanahy hatrany ny mpandeha. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
naharatsy (nitranga in-1) : Nangatsiaka dia nangatsiaka ny alina ary vao maika naharatsy izany ny onjan-drano nitopatopa nankao amin'izy ireo. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Pour (nitranga in-1) : Pour couvrir leur fuite, ils ont fait des tirs en l'air, deux selon les témoignages. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
moment (nitranga in-1) : Au moment où ils partaient, des éléments de la police, UIR et du commissariat central, étaient sur le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
RadioNandika (nitranga in-1) : -->
· Zarao:  twitter facebook reddit googleplus. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto  Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
entry (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
azoko (nitranga in-1) : Tsy azoko. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
rakipeo (nitranga in-2) : Hanohy hanasongadina ny votoaty novokarin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices izahay, tahaka ny GV podcast nahazo marim-pankasitrahana, ny rakipeo avy amin'ireo fotoana voafantina nandritra ny fihaonambe nataonay farany, ary ny rakipeo avy amin'ireo tafatafa tao amin'ny GV Face. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Ihosy (nitranga in-2) : dimy tamin'ireo dahalo nirongo basy sy fitaovam-piadiana avy nangalatra omby 120 vao naraina tao amin'ny tanànan'i Soatanimbary Ihosy no maty lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana ny herinandro iny. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
harivariva (nitranga in-1) : Efa harivariva vao tena tontosa ny fotoana, izay ny niafarany teny Anosipatrana. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
pétards (nitranga in-1) : Chose curieuse, selon toujours les témoignages, les détonations produites par leurs armes s'apparentent plutôt à des explosions de pétards. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
roalahy (nitranga in-1) : r
armés (nitranga in-2) : Par ailleurs, trois personnes selon des sources auprès des Forces de l'ordre, des bandits armés, ont été interceptées par les éléments de cette unité. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
脱原発に１票 (nitranga in-1) : com/N1a4Z8bafN”
— ＯＺ　脱原発に１票 (@OZ_WhiteKnight) August 30, 2015 Mandatsa-dranomaso ahy ity sary ity. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
aloha (nitranga in-2) : Ny talata lasa teo ny fotoana nifanomezana ka teny amin'ny fasan'ny karàna teny Anosizato aloha no natao izany. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, www.midi-madagasikara.mg)
Demotix (nitranga in-1) : Copyright Demotix
Lalampanorenan' (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny, milaza ny mpanao fihetsiketsehana fa manohitra izay fikasana mihaotraotra na mihodidina amin'ny andininy faha-9 amin'ny Lalampanorenan'i Japana ry zareo, izay manondro mazava tsara ny fandrarana an'i Japana tsy hanao ady. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
Boto (nitranga in-1) : Efa tara anefa ny fahatongavan'ireto farany ka nampanano sarotra ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy, hoy ny filohan'ny fokontany ao Mahavatse Tanambao, Atoa Boto Victorien, nitafa tamin'ny mpanao gazety, omaly antoandro. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
haut (nitranga in-1) : Vers l'heure indiquée plus haut, un grossiste du quartier d'Antarandolo a été visité par cinq hommes armés. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Anosibe (nitranga in-1) : Natao teny Anosibe indray nony avy eo ary mbola tsy tonga ihany ny mpitondra ny basy. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
natao (nitranga in-1) : Ny talata lasa teo ny fotoana nifanomezana ka teny amin'ny fasan'ny karàna teny Anosizato aloha no natao izany. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
Nokapay (nitranga in-1) : Nokapain'ireo jiolahy famaky avy hatrany rangahy tompon-trano, nitarika ny fahafatesany. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
fahazoana (nitranga in-3) : Tokana ny olana: mila taratasy fahazoana miasa izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
bruit (nitranga in-1) : Ceci peut-être pour dire qu'ils ont utilisé des armes de fabrication locale, moins de bruit mais beaucoup de dégâts. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Rothrock (nitranga in-1) : sarin'ny Global Voices Radio an'i Kevin Rothrock
namparatra (nitranga in-1) : Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana dia nandritra ny fanarahan-dia no raikitra ny fifadonana nahery vaika teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo dahalo, ka teo no nahafaty sy namparatra an'ireo malaso mpangalatra omby. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
tanjaky (nitranga in-1) : Tsy mampino ny tanjaky ry zareo. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
refugees (nitranga in-1) : On a boat to Italy w/ 234 other refugees and migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
capitale (nitranga in-1) : Encore sous le choc, hier soir, les policiers de la capitale du Betsileo ont entamé une enquête. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
twitter (nitranga in-10) : -->
fitotonana (nitranga in-1) : Miangavy anao hitsidika ny pejy fitotonana ao amin'ny GV Radio mba hijerenao ny zavatra mandeha amin'izao fotoana any amin'ny fiozaon'ora misy anao, sy izay fandaharana nomanina mandritra iny andro iny. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Bergamaschy (nitranga in-4) : “Tamin'ny 2013, lasa mpialokaloka mandositra ady tao Ejipta i Thair,” hoy i Sara Bergamaschi, namana akaikin'i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
anisan' (nitranga in-1) : Tsy maintsy teo amin'ny tokotanin-tsambo no natorian'ny sasany amin'izy ireo ary anisan'izany i Orfahli. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Italia (nitranga in-4) : Noho ny fahamaroan'ny mpialokaloka Syriana mitady lalana mankany Gresy sy Italia dia tsy sarotra ny mahita mpanondrana an-tsokosoko. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
lalàna (nitranga in-5) : An'aliny indray ireo olona nivory tao afovoan-tanànan'i Tokyo tamin'ny 29 aogositra hanoherana ilay lalàna mampiady hevitra hamela an'i Japana handray anjara amin'ny bemidina ara-miaramila miaraka amin'ny firenena hafa tahaka an'i Etazonia. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nangatsiaka (nitranga in-1) : Nangatsiaka dia nangatsiaka ny alina ary vao maika naharatsy izany ny onjan-drano nitopatopa nankao amin'izy ireo. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
mihalany (nitranga in-1) : Mandritra izany fotoana izany dia mihalany haingana ny “visa”-ny satria nieritreritra izy fa tsy hiharatsy ny toe-draharaha, saingy niharatsy izany. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
vidé (nitranga in-1) : Une fois en possession du butin, les voleurs ont vidé le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
angidimby (nitranga in-1) : [Nahazo olona tokoa ny fihetsiketsehana] nila angidimby ry zareo handrakitra ny habeny. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
nahery (nitranga in-1) : Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana dia nandritra ny fanarahan-dia no raikitra ny fifadonana nahery vaika teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo dahalo, ka teo no nahafaty sy namparatra an'ireo malaso mpangalatra omby. (Ihosy : Dahalo dimy maty voatifitra, www.midi-madagasikara.mg)
novokary (nitranga in-1) : Hanohy hanasongadina ny votoaty novokarin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices izahay, tahaka ny GV podcast nahazo marim-pankasitrahana, ny rakipeo avy amin'ireo fotoana voafantina nandritra ny fihaonambe nataonay farany, ary ny rakipeo avy amin'ireo tafatafa tao amin'ny GV Face. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
utilisaient (nitranga in-1) : Il y a quelques semaines, après une attaque à main armée, les malfaiteurs utilisaient toujours cet embranchement de Sahalava pour disparaître dans la nature. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
arivo (nitranga in-1) : « Tsy nahitana na inona na inona momba azy tany aminy, ankoatra ny vola enina arivo ariary tao am-paosiny. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
Mandroseza (nitranga in-2) : mandrosezaRamatoa hita faty tao anaty rano
post (nitranga in-5) : Eric Manitrisa
demandé (nitranga in-1) : Une fois sur place, ces bandits ont demandé l'argent. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
central (nitranga in-1) : Au moment où ils partaient, des éléments de la police, UIR et du commissariat central, étaient sur le lieu. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
zotran' (nitranga in-1) : Amin'ny voambolana pratika, ny fiarahana miaro tena dia hidika hoe afa-manao bemidina famafana maro dia maro i Japana, mametraka sehatra fiarovana amin'ny sambo haingam-pandeha Aegis, ary miambina manaramaso ny zotran'ireo sambo mpitondra solika. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
盛田隆二 (nitranga in-1) : com/6iSK41wysH
lahatsoratry (nitranga in-1) : Hasongadina amin'izany ihany koa ny votoatin'ny mpiara-miasa voalaza tao anatin'ireo lahatsoratry ny GV Radio teo aloha, tahaka ny tantara dizitaly avy amin'ny Radio Ambulante, ireo podcast misongadina avy ao amin'ny Loa, ary ny hiran'izao tontolo izay avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV avy any Meksika sy Gana, sy ireo maro hafa. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
Lalampanorenana (nitranga in-3) : Ny Lalàna vaovaon'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana, izay mety tsy hifanaraka amin'ny Lalampanorenana ara-teknika, dia manitsakitsaka ny hevitry ny andininy fahasivy amin'ny “lalampanorenan'ny Fandriampahalemana” Japoney taorian'ny ady [lehibe faharoa]. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
plus (nitranga in-1) : Vers l'heure indiquée plus haut, un grossiste du quartier d'Antarandolo a été visité par cinq hommes armés. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
ushiro (nitranga in-1) : com/DWfMGYE1kI — ushiro teruhito (@ustht) August 30, 2015
Andranovory (nitranga in-1) : Vola izay saika hividianana entana hoentina hitety tsena any Andranovory Toliara II. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
InternationalNandika (nitranga in-1) : Mpanoratra Public Radio InternationalNandika Jentilisa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza
Their (nitranga in-1) : Their strength is unbelievable. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
long (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
rindrambaiko (nitranga in-2) : Avy amin'ny alalan'ny sehatra fiadian-kevitra Airtime Pro, dia afaka hahazo ny tobin'onjampeonay ao anaty Aterineto ianao amin'ny fampiasàna rindrambaiko fanokafana vohikala na fitaovana azo entina mandehandeha. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
mampididoza (nitranga in-1) : com/0W7N9lxaK7
Novonoina (nitranga in-1) : Novonoina sa lasatsaka tao anaty rano. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
plutôt (nitranga in-1) : Chose curieuse, selon toujours les témoignages, les détonations produites par leurs armes s'apparentent plutôt à des explosions de pétards. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
nampandrenesina (nitranga in-1) : « Tokony ho tamin'ny 10 ora maraina teo izahay no nampandrenesina », hoy ny filazan'ny Sefo Fokontany eny an-toerana. (Mandroseza : Ramatoa hita faty tao anaty rano, www.midi-madagasikara.mg)
fitsangatsanganana (nitranga in-1) : I Jakub Górnicki no mampiantrano ny Spotlight, izay podcast vaovaon'ny bilaogy miresaka fitsangatsanganana sy fanaovana tatitra, Podróżniccy. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
interceptées (nitranga in-1) : Par ailleurs, trois personnes selon des sources auprès des Forces de l'ordre, des bandits armés, ont été interceptées par les éléments de cette unité. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
ailleurs (nitranga in-1) : Par ailleurs, trois personnes selon des sources auprès des Forces de l'ordre, des bandits armés, ont été interceptées par les éléments de cette unité. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
visité (nitranga in-1) : Vers l'heure indiquée plus haut, un grossiste du quartier d'Antarandolo a été visité par cinq hommes armés. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
podcast (nitranga in-7) : Mandritra ny 24 ora isanandro, ary 7 andro isan-kerinandro, dia afaka hankafy ireo fandaharana eran-tany ny mpihaino, tafiditra anatin'izany ny hiran'izao tontolo izao, ireo tafatafa mikasika ireo hetsika vaovao, ary ny votoaty tsy misy toa azy avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny podcast anay manerana ny fiozaon'ora samy hafa. (Mandeha Tsy An-kiato Anaty Aterineto Ny Global Voices Radio Ankehitriny, mg.globalvoicesonline.org)
transporté (nitranga in-1) : Ce dernier a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
dangerous (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
namaky (nitranga in-1) : Raha ny fanazavana azo dia niditra an-keriny tao an-trano ireo jiolahy sady nanapoaka basy rehefa avy namaky ny varavaram-be anankiroa. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
Shirin (nitranga in-1) : Copyright Demotix
raha (nitranga in-7) : Maty voakapa famaky teo amin'ny lohany ny raim-pianakaviana tompon-trano, fantatry ny maro amin'ny hoe : « Nahoda Jules », raha naratra mafy voatoto vodim-basy teo amin'ny lohany kosa ny vadiny. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, www.midi-madagasikara.mg)
commandant (nitranga in-2) : Selon les informations qui nous sont parvenues, le commandant de L‘Unité d'Intervention Rapide (UIR) de la police a été atteint par deux balles aux pieds. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Nampihoronkoditra (nitranga in-1) : Nampihoronkoditra azy ilay eritreritra. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
arabo (nitranga in-1) : “Araka ny lalàna ejipsiana dia mila mangataka io taratasy fahazoana miasa io avy amin'ny fikambanana arabo ara-dalàna iray ao amin'ny firenenao,” hoy ravehivavy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
trip (nitranga in-1) : After a long & dangerous trip I arrive in #Munich, the entry point for many migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
hafa (nitranga in-7) : Mandritra ny 24 ora isanandro, ary 7 andro isan-kerinandro, dia afaka hankafy ireo fandaharana eran-tany ny mpihaino, tafiditra anatin'izany ny hiran'izao tontolo izao, ireo tafatafa mikasika ireo hetsika vaovao, ary ny votoaty tsy misy toa azy avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny podcast anay manerana ny fiozaon'ora samy hafa. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
tara (nitranga in-1) : Efa tara anefa ny fahatongavan'ireto farany ka nampanano sarotra ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy, hoy ny filohan'ny fokontany ao Mahavatse Tanambao, Atoa Boto Victorien, nitafa tamin'ny mpanao gazety, omaly antoandro. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
réellement (nitranga in-1) : On ne sait pas ce qui s'était passé réellement car la poudre a parlé. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Hialana (nitranga in-1) : Hialana amin'ny fombafombam-panitsiana lalampanorenana lava dia lava izay mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ny Lapa Ambony amin'ny herintaona, dia miezaka ny “hamaritra indray” ny fandefasana miaramila amin'ny voambolana mifanaraka amin'ny Lalampanorenana Mandala ny Fandriampahaleman'i Japana ny antoko mitondra ao amin'izao fotoana. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
other (nitranga in-1) : On a boat to Italy w/ 234 other refugees and migrants. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
armée (nitranga in-1) : Il y a quelques semaines, après une attaque à main armée, les malfaiteurs utilisaient toujours cet embranchement de Sahalava pour disparaître dans la nature. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
Pikantsary (nitranga in-1) : ” Pikantsary avy amin'ny Fantsona Youtube Ofisialin'ny FNN. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
2500 (nitranga in-1) : “Nilaza tamiko izy fa mila 2500 dolara,” hoy izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
hiadivana (nitranga in-1) : Isan'ny andrasana ny valin'izany sy ny hoe ho sahy handeha hatramin'ny farany ve ny BC amin'ity fanadihadiana ity ary koa, hanampy azy ve ny fitsarana ao anatin'izany mba hiadivana amin'ny fiparitahan'ny basy izay fototry ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana. (Anosipatrana : Kalachnikovs roa namidy, roalahy nosamborin’ny BC, www.midi-madagasikara.mg)
papa (nitranga in-1) : ' Ary izaho toa niteny hoe, ‘Ye, papa, faly izy satria velona. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Jordania (nitranga in-1) : Any Arabia Saodita ny iray amin'ny mpiray tampoho aminy, ny hafa any Jordania, Torkia ary Libanona. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nody (nitranga in-1) : Niverina nody nitsidika hatrany ny fianakaviany tao Jobar, tsy lavitra ny renivohitra Syriana ao Damaskosy, izy. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Simpson (nitranga in-3) : Nanome ny kaonty Twitter-ny tamin'i Orfahli ilay mpihira Aostraliana Cody Simpson ahafahany mandefa an-tsioka ny diany. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
nampandre (nitranga in-1) : Lehilahy iray teo an-tokotany notifirin'ireo jiolahy nefa tafaporitsaka no niezaka niantso vonjy teo amin'ny manodidina sady nampandre ny sefo fokontany. (Toliara : Mpandraharaha maty voakapa famaky, lasa ny vola iray baoritra, www.midi-madagasikara.mg)
Rapide (nitranga in-1) : Selon les informations qui nous sont parvenues, le commandant de L‘Unité d'Intervention Rapide (UIR) de la police a été atteint par deux balles aux pieds. (Fianarantsoa : Le commandant de l’UIR atteint par deux balles, www.midi-madagasikara.mg)
2000 (nitranga in-1) : “Nilaza aho fa 2000 dolara ihany no ananako. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
Aegis (nitranga in-1) : Amin'ny voambolana pratika, ny fiarahana miaro tena dia hidika hoe afa-manao bemidina famafana maro dia maro i Japana, mametraka sehatra fiarovana amin'ny sambo haingam-pandeha Aegis, ary miambina manaramaso ny zotran'ireo sambo mpitondra solika. (Niteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila, mg.globalvoicesonline.org)
2009 (nitranga in-1) : Bergamaschi, izay Italiana ary miasa hoan'ny Firenena Mikambana, dia nihaona tamin'i Orfahli nandritra ny dia iray nankany Syria tamin'ny 2009. (Dia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa, mg.globalvoicesonline.org)
mg.globalvoicesonline.org – teny vaovao 210
www.midi-madagasikara.mg – teny vaovao 150
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/1_Septambra_2015&oldid=21432841"
Voaova farany tamin'ny 1 Septambra 2015 amin'ny 21:00 ity pejy ity.